Cele News Archives - Page 47 of 195 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 47)
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလို လက်ရှိအချိန်မှာလည်း နာမည်ကျော်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ သုသုလို့လည်းချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေပြီး နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း သူ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့အကောင့်တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီ Viber accountက သုသုနာမည်နဲ့စကားတွေလိုက်ပြောနေပါတယ်…(အနုပညာလောကကသူတွေကိုပါလိုက်ပြောနေတာပါ ဓါတ်ပုံပါ‌တောင်းပါသေးတယ် ) ဒီ accountက သုသုနဲ့ဘယ်လိုမှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးရှင်…. ဒါကြောင့်မို့ ဒီaccountပိုင်ရှင်‌ရဲ့မည်သည့်လုပ်ရပ်အပြုအမူကိုမျှတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသွားမည်မဟုတ်ပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားဖော်ပြလာာပါ။ အနုပညာရှင်တွေကတော့ မိမိနာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရလေ့ရှိတာပါ။ သုသုကတော့ နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အနုပညာလောကသားတွေကိုတောင်မှစကားပြောတဲ့Viberအကောင့်ရှိနေတာကို ကြုံခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ source : PaingPhyoThu
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးခြင်းပြီးဆုံးသွားပေမယ့်လည်း အနုပညာရှင်တွေကတော့ သူတို့ယုံကြည်ရာပါတီအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေဆဲပါ ။ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားထဲနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကို ထိုးဖောက်နေရာ ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီနာခီကလည်း “ခွပ်ဒေါင်းအောင်လံပြည့်သူ့အသံ” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ Page လေးကနေတဆင့် NLD အတွက်ရိုက်ကူးရေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ၊ ခရစ္စတီနာခီ က သူမ တို့ရဲ့ “ခွပ်ဒေါင်းအောင်လံပြည့်သူ့အသံ” page အတွက် ရိုက်ကူး၊တည်းဖြတ်၊ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူများနဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဓါတ်ပုံထဲမှာ editor တယောက်နဲ့ကားဆရာ ၄ယောက်တော့မပါဝင်ဘူးလို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါသေးတယ် ။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာရိုက်ကူးရေးအဆင်ပြေဖို့ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပြီး ရိုက်ကူးရေးအတွက် သူမ အလုပ်များနေချိန်မှာ နိုဝါလေးကိုထိန်းပေးတဲ့ ညီမအယ်ဘူစေးနဲ့ ကယားမှာသားသားလေးနဲ့အဖော်နေပေးတဲ့မောင်လေးဝေယံတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ် ။ …
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးထုတ်လွှင့်မပြသခင်မှာ ဆရာသမားကို သွားရောက်ဂါရဝပြုခဲ့တဲ့ ဝေလာရီ\_နှင်းဆီဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မော် အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးခြင်းရရှိခဲ့တဲ့ ဝေလာရီကတော့ မွန်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဝင်းဝါဖြူစင်တဲ့အသားအရည်နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် မိုးရိုးရာအထည်တွေကိုလည်း ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်မို့ ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ(၁၆) ရက်နေ့ MRTV-4 ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မနေ့ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲမပြသခင် ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတစ်ပါးလို လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ဒါရိုက်တာဦးဟိန်းစိုးကို သွားရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ လိမ္မာသိတတ်တဲ့ ဝေလာရီကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ကြသလို အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ဒီထက်မက အောင်မြင်စေဖို့လည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ ကောင်းသူကို ကောင်းတယ်လို့မြင်ပြီး ဆိုးသူကို …
အနုပညာရှင်တွေကတော့ အနုပညာဖန်တီးမှုအသစ်တွေကို ဆက်တိုက်ကြိုးစားနေလေ့ရှိသလို ပရိသတ်တွေကိုလည်း ချပြလေ့ရှိတာပါ။ အခုလည်း ပိုးကြာဖြူခင်နဲ့ကျော်ထက်ဇော်တို့ကတော့ ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်မျှော်လင့်နေစေမယ့် ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ပုံရိပ်တွေကို ချပြလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ Music Video အတွက် ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုလည်း အသိပေးလာခဲ့တာပါ။ ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ “မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် MV shooting .. Coming soon” ဆိုပြီးတာ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။ ဒီ Music Video ကိုတော့ V7Entertainment ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာရိုက်ကူးအောင်မြင်ခဲ့သလို လက်ရှိမှာလည်း “မာယာလှည့်ကွက်” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေသူပါ။ ကျော်ထက်ဇော်ကလည်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အတူ နာမည်ကြီးလျက်ရှိပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ …
မိုးယုစံကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ Austin ကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်ကစပြီး အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားပြီး မိသားစုကိုပဲ အချိန်ပေးနေခဲ့တာပါ ။ မိုးယုစံကိုချစ်သလို Austin လေးကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပေးကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် မကြာသေးမီက မှ ဒုတိယ ကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်း မိုးယုစံက အသိပေးခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ ကိုယ်ဝန်က (၂၂) ပတ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ဗိုက်ဗိုက်ကလေး ၂၂ပတ်ရှိပီ သားနှစ်ယောက်မေမေဖြစ်တော့မယ် လူလည်းတဖြည်းဖြည်းဝလာပါပီ ဒီကာလကြီးမှာ မေမေတွေကျန်းမာရေးပိုဂရုစိုက်ကြနော် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သားသားနှစ်ယောက် အမေဖြစ်တော့မယ့် မိုးယုစံက သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နောက်ထပ်သားသားလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးပေးဖို့ မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ် …
သရုပ်ဆောင် မိုးယံဇွန်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇေယျက ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။မကြာသေးမီကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူကို အားပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မိုးယံဇွန်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ် ။ မနေ့ကတော့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာ မဲပေးခဲ့ပြီး အာဆီယံမှာအဆင်းရဲဆုံးဂုဏ်ပုဒ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် အစိုးရကို လိုချင်ပါတယ်လို့ မိုးယံဇွန်က သူ့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားမျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ကိုယ့်ဆန္ဒမဲ ၃မဲမှာ ၂မဲ နိုင်နေပီး ၁မဲ ရှုံးဖို့အနေအထားဖြစ်နေပြီ ဘာဖြစ်ဖြစ် အင်အားကြီးပါတီတခုရဲ့အထက်မှာမဲ အရေအတွက် အသာနဲ့ရှိနေလို့ အဖေ့ အတွက် အမြဲဂုဏ်ယူပါတယ် လို့ ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။ မိုးယံဇွန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မိုးယံဇွန်ရဲ့ဖခင်အတွက် …
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် Oasix ရဲ့ဖခင်ဟာ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့က ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း မိသားစုနဲ့ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက က လေဖြတ်တာ ၁၄ နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး စကားမပြောနိုင် ကိုယ်လက် တခြမ်း မလှုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ် ။ Oasix က ၂၀၁၉ခုနှစ် သူ အိမ်မှာ ပြန်နေပြီးနောက်ပိုင်း သူတို့ မိသားစုလေးဟာအရင်ကထက် ပိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . ဖေဖေက သူ့မြေးတွေဆို နေ့တိုင်း ခိုးပြီး မုန့်ဖို့းပေးနေကျ အိမ်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း/ ရေပိုက် / စက်ပစ္စည်း တခုခုပျက်ပြီဆိုရင် ရအောင် ပြင်နေကျ အိမ်က လူတွေ ညဆို ပြန်မလာသေးရင် အမြဲစိတ်ပူတတ်တဲ့ …
Examplez အဖွဲ့နာမည်ကြီးစဉ်က တောမှာဘောင်းဘီအကြီးကြီးတွေဝတ်ပြီးဆော်ကြည်နေခဲ့တာ ဆိုတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ Examplez ဆိုတဲ့အဖွဲ့နာမည်နဲ့ 90 kids တွေ အသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ် အဆိုတော်အဖွဲ့လေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ အဲဒီခေတ်အခါက ဆယ်ကျော်သက် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘောင်းဘီပွပွ အင်္ကျီပွပွတွေကလည်း အတော်လေး ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေလို့ဆိုရမှာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ အဆိုတော် ထွန်းထွန်းက ExampleZ တွေ ၂၀၀၆ လောက် ကပေါ့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်လေး မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်က အဲဒီအချိန်တုန်းက (၁၀) နှစ်သားအရွယ်သာရှိသေးပြီး တောမှာ ဘောင်းဘီအကြီးကြီးတွေ ဝတ်ပြီး စော်ကြည်နေတဲ့အချိန်လို့ ရေးသားမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ …
မိဘနှစ်ဦးစလုံးpositive အဖြေထွက်ခဲ့ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ ရှိန်းတင်ထူး
ရှိန်းတင်ထူးကတော့ တက်သစ်စမော်ဒယ်လ်၊မင်းသားတွေထဲမှာနှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ဝန်းရံအားပေးခြင်းခံထားရသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “သူစိမ်းအိမ်” ဇာတ်ကားကြီးနဲ့လည်း ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိထားသလို အနုပညာအလုပ်တွေလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးပါ။ ရှိန်းတင်ထူးကတော့ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက မိဘနှစ်ပါးစလုံးကကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတာကြောင့် သူကိုယ်တိုင်လည်း ဟိုတယ်မှာကွန်ရန်တင်းဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေကဟာ Negative ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ဖေ့ဘွတ်ခ်မှတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အခုလိုဆေးစစ်ချက်အဖြေကောင်းရရှိခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာနေကြပြီး ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့လည်း မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတေ့ာ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကတစ်ကမ္ဘာလုံးဟာကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါရဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံရကာ သေခဲ့ကြသူတွေလည်း များစွာရှိနေတာပါ။ မိဘနှစ်ဦးစလုံးက ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကတော့ Negative အဖြေထွက်ခဲ့တာ ဝမ်းသာစရာပါပဲနော်… Source : SheintinHtoo
ရွှေမန်းမျိုးဆက်သစ်လေး ဆိုးပေအတွက် ရင်ထဲကစကားတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေမန်းသဘင်ကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာမျိုးဆက်သစ်တွေ အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာကြာသလို ဒီနေ့လေးကတော့ ရွှေမန်းသဘင်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေး မင်းရွှေရောင်တင်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ မင်းရွှေရောင်တင်ကတော့ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းရဲ့ သားလေးဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ပါ။ မကြာသေးခင်ကမှ ခင်လှိုင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဆိုးပေဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အနုပညာအပေါ်လေးလေးနက်နက်ထားတဲ့စိတ်လေးနဲ့ မင်းရွှေရောင်တင်ကိုတော့ ခင်လှိုင်က အခုလိုပဲ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ … ရွှေမန်းသဘင်ရဲ့မျိုးဆက်…ချစ်စရာအလွန်ကောင်းပြီး…သူ့ရဲ့စိတ်ရင်း.. စေတနာ.. သဒ္ဓါတရားက.. မြင်တဲ့လူတိုင်းကချစ်ကြတဲ့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပေါ့….အရွယ်နှင်မမျှအောင် အနုပညာအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်လေးက..သူနှင့်အလုပ်အတူတူလုပ်ကြည့်မှသူ့ရဲ့အားစိုက်မှုကို ပိုသိသာလာခဲ့တယ်… ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပါစေမျက်နှာတချက်လေးမပျက်ဘဲ ဇွဲရှိရှိကြိုးစားခဲ့တာ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုနေတယ်… သူ့အကြောင်းလေးတွေ သေသေချာချာမသိခင်မှာတော့ သူကလေးကိုကျွန်တော့်ရင်ထဲသိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး… တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်းရဲ့သား…မင်းရွှေရောင်တင်ပေါ့ ဒီထက်မပိုခဲ့ပါဘူး…မကြာသေးခင်အချိန်က…ဆိုးပေ ဇာတ်လမ်းတွဲ နှစ်လခရီးစဉ်အပြီးမှာတော့ ဒီကလေးကကျွန်တော့်ရင်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်… ပူတူး…မင်းရွှေရောင်တင် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ …..ဆိုးပေ… ဒီနေ့ကြရောက်သောမွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာမှ စပြီးနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောအနုပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီး မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်သော …